SONATA-CANTATA: Sonata - Cantata ရဲ့ အတွေးအမြင်
သြော်.. သားနှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်လေးတွေနဲ့ ဘလော့နာမည်ပေးထားတာပေါ့နော်။
ဟုတ်တယ်မသီတာ၊ ကျွန်မသမီး ၂ယောက်မှာလည်း အငယ်မက အမေးအမြန်တအားထူတာ။ မောင်လူအေးဝတ္ထုထဲက မောင်လူမွှေးအတိုင်းပဲ။ အငယ်တွေက ပို creative thinking, critical thinking ပိုရှိနေတာတွေ့ ရတယ်နော်။ အကြီးမကတော့ ခိုင်းတာလုပ်တာပါပဲ။
နာမည် အရင်းတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ နာမည် အစ စာလုံးတွေနဲ့ Blog နာမည်ကို ရွေးလိုက်တာပါ။
Comment တွေ အတွက် ကျေးဇူးပါ... မယုဝရီ
ကလေးငယ်တွေရဲ့အတွေးအမြင်လေးတွေက တကယ်ကို အပြစ်ကင်းစင်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ်။ မိဘတွေရဲ့နည်းမှန် လမ်းမှန် ဆုံးမသွန်သင်မှုတွေနဲ့အတူ လေးနက် မှန်ကန်တဲ့ တွေးခေါ်မှုတွေကလဲ သူတို့ လေးတွေအပေါ် သက်ရောက်မှု အလွန်များတာ တွေ့ ရပါတယ်။
အစစအရာရာ ဘက်စုံ အောင်မြင် ထူးချွန်တဲ့ သားနှစ်ယောက်ပိုင်ရှင် မသီတာ ဖြစ်ပါစေ...။
သီတာရေ... ကလေးတွေရဲ. အတွေးတွေ ကို ဖြစ်နိုင်ရင် များများတင်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ရိုးသားဖြူစင်သလို စိတ်ဝင်စားစရာလည်း ကောင်းပါတယ်။ တခါက တို.သားကို ပြောခဲ့ဖူးသလိုပေ့ါ။ သား.. ဘယ်သူဘယ်ဝါကတော့တော်တယ်၊ လိမ္မာတယ်.. သား သူ.ကို အတုယူရမယ်နော် ဆိုတော့... အတု ဆိုတာ မကောင်းဘူးဆို မေမေက အစစ်မယူခိုင်းပဲ ဘာဖြစ်လို. မကောင်းတဲ့ အတုကို ယူခိုင်းရတာလဲ ဆိုတော့... တို.လည်း ....အင်း..ဘာပြောရမှန်း မသိဖြစ်သွားရတယ်လေ..။ ဟဲဟဲ
Sonata, cantata ညီအကိုလေးက ဒီက မြန်မာအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ စံပြပါ… မိဘဘိုးဘွား သွန်သင်ဆုံးမမှုကို လိုက်နာတတ်တဲ့ မြန်မာပီသတဲ့ မြန်မာကလေးတွေမို့အားကျမိပါတယ်… သားကို ဘယ်လိုဆုံးမရမှန်းမသိတဲ့အခါ အမျိုးသားကို အမြဲပြောမိတယ်… Sonataတို့ အိမ်နဲ့ နီးရင်ကောင်းမှာပဲလို့ … အတုခိုးစေချင်တာပါ… မ ရေ… နည်းလေးဘာလေးပေးပါဦး….
သက်ဝေ တောင်းတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ဝရစေသား။
ကလေး အတွေးတွေ များများရေးခိုင်းတဲ့ မြတ်နိုးနဲ့ သိင်္ဂီရေ ဘာလိုလိုနဲ့ တို့တွေ လူကြီးဖြစ်ရတော့ မှာပါလား။
တန်ခူးရေ အချီးမွမ်း မစောနဲ့ဦး တို့တွေက အခုမှ တာ ထွက်ကာစပဲ ရှိကြသေးတာလေ..နော်